Home Wararka Xildhibaanno Somaliland oo la Rabay in Baydhabo lagu Xabiso oo Farmajo Runta...
Xildhibaanno Somaliland oo la Rabay in Baydhabo lagu Xabiso oo Farmajo Runta u Sheegay
Kadib markii uu fashilmay qorshihii ahaa in Baydhabo lagu xabiso xildhibaanada Dirta iyo Digil iyo Mirifle ayaa waxaa xafiiskiisa loogu keenay Farmajo Xildhibanno Somaliland ka soo jeeda ee doorashada ku soo baxay.
Farmajo waxaa uu u sheegay inuu rabay inay xildhibaanda walaalahood ee Digil iyo Mirifle iyo beesha shanaad inay isfaham ka yeeshaan qaabkan 4.5 ee awoodda siinaya hawiyaha iyo Daaroodka oo wax laga badalo. Markii la isa salaamay kadib ayuu hadalkii qaatay Farmajo.
Faramajo: Waxaan ogahay inaad diideen inaad Baydhabo tagtaan oo aad la kulantaan Xildhibaanada faraha badan ee halkaas idinku sugayey iyo aniga oo idinku soo biiri lahaa, si aan uga wada arrinsanno caadadaan khaldan oo laba beelood oo kaliya siineysa awoodda dalka oo dhan.
Xildhibaanki 1aad: Mudane annagu munaafaqeynta ma naqaanno haddii aanan si saxaari ah aannaan u wada hali kareyn waannu ku dhageysaneynaa.
Faramajo: Maya maya waxaan u wada hadleynaa si furan.
Xildhibaankii 1aad oo hadalka ku laabtay ayaa yiri: ma annaan fileyn in dabin naloo dhigayo oo aad rabteen inaad halkaas nagu xidhaan, taasi waxay I xusuusineynaa gabaygii Faarax Nuur ee ahaa : Qosol been ah fool wada qayaxan, qiil aan garanaayo, Booraan afkii laga qafilay, qabarna hooseeyo, Doqon baa halkii lagu qatali, qoorta soo dhigane. Waar annagu nalama khaldi karee mudane arrinka si kale ha loo dhigo.
Farmajo: Yaa idin khaldaya haddii la idin yiri walaalahiin la hadla oo wax meel wada dhigta.
Xilhibaankii 2aad: Madaxweyne mar haddii aad damacdeen inay Baydhabo nagu xayidhaan soow inala khaldi rabo maaha? Mar haddaad damacdeen beelaha kale inaad nagu dirtaan sow taasi khaldid maaha, weliba beeshaan aan sida sharfle u dhex deggananay oo aan calooshooda naallo inay cadaawad nooga sameysaan sow khaldid maaha? Haddaan bilowno inaan hadda beelo beelo u shirraa sow halkii laga keenay u noqon meyso? Raggi waa kii tashadee markaan annagu iyaga u tashaneyno sow iyagana ma bilaabi karaan inay noo tashadaan oo weliba isticmaalaan waxay heli karaan si ay u gaaraan waxa ay rabaan? Madaxweyne waan leeyahay tani maaha waddo sax ee arrinka si kale loo dhigo oo yaan nalo celin xelli ay beeluhu kala shiraan isuna shiraan.
Farmajo: Oo shigshigay ayaa si caro leh u yiri: Yaa Yaa idinku yiri waa la idin xerayaa? Ma aniga iga maqashee, misa xafiiskeyga ayaad ka maqasheen?
Xildhibaankii: Waar ma adiga dad la hadla oo kan shibta uun ku urursan , haddey baaba’ayso iyo haddey baraareyso, misa Somali baa wax ku dhexqarsamaan?
Farmajo: waa runtaa oo ma hadal badni laakiin Wa waxaad waxaad og tihiin rafaadka aan ka soo marray inaan doorashadiinna qabbano…
Markuu intaas marayey ayaa xildhibaannaddii is wada eegeen kadibnka
Xildhibaan: ayaa si adag u yiri “ Waar ma annaga waalan misa Cadan baa laga heesayaa? War waa annaga kuwa dhibka galay ee naftooda khaterta geliyey ee dadkoodii uga soo tagay inay midnimada ilaaliyaan ee annaga khater na looma gelin weliba mudane haddaan si saraaxad leh kuula hadlo adiga ayaaba noogu darraa oo intaa nakala qeybinayey oo ciyaalkaagu BBC misa CBB ayey ahaayeen ay odayaasheenna aflagaadeynayeen ee halkaa ha nagu celin ee noo sheeg waxa aad naga rabtid oo aad noogu yeertay?
Farmajo: Waxaan idin ka rabaa inaad Beydhabo tagtaan meeshii aad degi lahaydeen iyo wixii aad cuni lahaydeen waa la idiin diyaariyey.
Xildhibaan ayaa si kaftan ah u yiri : Madaxdweyneyne reer Baydhabo waa walaalahayoo dal baa naga dhaxeeya laakiin ma annagaaba is fahmeyna. Waa lawada qoslay laakiin Farmajo qosol kama joogto, dhowr qof oo xildhibaanada Somaliland ah oo uu hiillo ka filayey xataa xagga kale ayey soo jeesteen.
Xildhibaan Oday ah ayaa si deggan u yiri: Qamaan Bulxan baa laga hayaa “Ma dumaalo naaguhu ninkay, nolol ku dayrshaane. Dayib uma yidhaahdaan jeeroo, hawli daashado e
Nin walaalkii doorsaday Ilaah, derejo siin waaye….” ilaa laga soo gaaro tuducyada caanka ah ee “..Baadida ninbaa kula deydeya, daalna kaa badane. Oon doonahayn inaad heshana, daayin abidkaaye. Dadkuna moodi duul wada dhashoon, wax u dahsoonayne.
Annaga dal iyo Midnimo ayaan dooneynaa oo dadkeenna uga nimi, kadib markii ay noola muuqatay inaan lakala marrmeyn adiguna haddeer ayaad rabtaa inaad beel beel noo shirisid, kadibna aan beelo isugu dhacno, wannu kaa diidnay waana naga dhab. Teeda kale ee xigtaa waxaa weeyi si aan adiga kuu ololeyno waa inuu noqdaa go’aan iyo ninkii ee Somaliland ahaan cid kuu garbaduuban ma jirto.
Farmajo: Isagoo wejiga kaduudayo ayuu ku soo booday oo yiri hadda raggu waa is bartay ayaan filayaa 5tii sano ee aan dalka soo wadnay iyo wixii aan ka qabannay midnimada.
Xildhibaan: Mudane waa run waa la is bartay, haddiisa ay hanjabaad tahay annagu kuma jirno oo uma iman inaan kula tirsanno, wixii aad qabatay diiwaanka Somalida ayey kuu qormi doonaan.
Farmajo: Iska taga waan soo wada xiriireynaa, aaway odayaasha ha la sagootiyo.Markii ay albaabka ka baxeen ayey is wareysteen
Midbaa yiri: Waryaarehee ma qofkan ayey 5 sano Somalidu xukumayey?
Mid kala yiri: Waar wuxu waa cawaan oo aan waxba kala garaneyn.
Mid kalaa yiri: Waar anigu wax ma idiin sheegaa Waar yaanu nagu dirin reerkan aynu wada nool nahay ee Xamar sida sharafta leh noogu soo dhaweeyey ee aan weligood kalmad xanaf leh nagu oran.
Xildhibaankii ugu odaysaa baa yiri: Wallaahi waa runtaa sidaasey inoo tahay ee ogaada ninkanu caqli iyo abaal toona ma laha oo waa ka halkaas kaga tagay dhammaan wixii u dambaabay ee yaanu taariikhda inooga ciyaarin oo xaggaas iyo xagganba na seegin.
Previous article[DEG DEG] Ruushka oo hub aan wali dunida laga isticmaalin u adeegsaday Ukraine
Next articleDeni oo ku dhowaaqay go’aankiisa musharaxnimo ee xilka madaxweynaha
Wada tashigii magacaabidda Golaha Wasiirada oo soo dhamaaday, lana shaacin doono...